सडकमा राजनीतिक दलले राखेको ब्यानर खसेर २३ बर्षे महिला ईन्जिनियरको मृत्यु — SuchanaKendra.Com
सडकमा राजनीतिक दलले राखेको ब्यानर खसेर २३ बर्षे महिला ईन्जिनियरको मृत्यु
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/५/२८ गते
काठमाडौ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना लागि लगाएको ब्यानर निश्चित समयपछि अनिवार्य हटाउनुपर्छ । तर त्यसो नगर्दा धेरैको ज्यान गएको छ । भारतको चेन्नईमा एक २३ बर्षे महिला ईन्जिनियर आर सुश्रीको सत्तारूढ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझागम (एआईएडीएमके) को ब्यानर खस्दा मृत्यु भएको छ । ब्यानर खस्नाले महिलाको सन्तुलन बिग्रियो र पछाडिबाट आइरहेको पानीको ट्याङकरले उनलाई ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको हो ।
शुक्रबार मद्रास उच्च अदालतले उक्त घटनाको हवाला दिदैं एउटा अवहेलना याचिकाको सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई सडक रंगाउन कति लिटर रगत चाहिन्छ ? भनेको छ । यस देश मा नोकरशाही को दयनीय दृष्टिकोण को कारण, जीवन को सम्मान शून्य छ । हामीले यस सरकारमा विश्वास गुमायौं ।
अदालतले भन्यो कि मुख्यमन्त्री अब त्यस्तो अनधिकृत ब्यानरहरूको बिरूद्ध केही बयान दिन इच्छुक छन् कि छैनन् । मद्रास उच्च अदालतले गैरकानुनी ढंगले लगाइएको ब्यानरहरू प्रतिबन्ध लगाउन र यस आदेशलाई कडा रूपमा लागू गर्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । उच्च अदालतले भन्यो कि एक महिला ईन्जिनियर जीवित भइन भने देशको जीडीपीमा कती योगदान पुर्याउन सक्थिन कल्पना गर्नुहोस् ।
महिला ईन्जिनियरको स्थानीय एआईएडीएमके कार्यकर्ताले छोराको विवाहमा लगाएको ब्यानरले मृत्यु भयो । अदालतले यसमा कडा प्रतिक्रिया दियो, जसले भन्यो कि नेताले ब्यानर बिना आफ्नो छोरालाई विवाह गर्न सक्दैन ? वा यस शहर मा, मन्त्री यस्तो ब्यानर को अभाव मा विवाह स्थल पुग्न बाटो बिर्सन्छ ।
एआईएडीएमके र राज्यको मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कझागम ९डीएमके० र अन्य विपक्षी दलले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई त्यस्तो ब्यानर पोस्टर नराख्न आग्रह गरेका छन जसले नागरिकहरुलाई असुविधाजनक हुन्छ । यस क्रममा, पुलिसले भने कि ब्यानर लगाउने कामदारका विरुद्ध एफआईआर दर्ता भएको छ । ब्यानर प्रिन्ट गरिएको प्रिन्टर पनि बन्द गरिएको छ ।
नियम अनुसार ब्यानर–पोस्टर वा होर्डिङ राख्नको लागि अनुमति आवश्यक पर्दछ । ब्यानर छाप्नको लागि अनुमति नम्बर, प्रदर्शन अवधि, आयातकर्ताको नाम र प्रिन्टरको नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । हालको राज्य नियम अनुसार, यदि ब्यानर पोस्टर अनुमति बिना राखिएको छ भने प्रिन्टर प्रिन्टिंगलाई बन्द गर्न सकिन्छ ।